သုဝဏ္ဏဘူမိသုတေသနဖြင့် အမျိုးသားစာပေဆုရရှိသူ ဆရာဦးစံဝင်း > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / သုဝဏ္ဏဘူမိသုတေသနဖြင့် အမျိုးသားစာပေဆုရရှိသူ ဆရာဦးစံဝင်း
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ November 6, 2014 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 164 Views
ရေးသားသူ: မေးမြန်းချက် > အေမီအောင်
မေး။ ။ပထမ ဦးဆုံးအနေနဲ့ ဒီစာအုပ် ရေးသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး ပြောပြပေးပါ ?
ဖြေ။ ။ဆရာက သထုံမှာမွေးတယ်၊ သထုံခရိုင်မှာ သထုံမြို့ဟောင်းရှိတယ် ဆိုတာကို မသိကြဘူး၊ ဆရာက ဒါကိုသိတယ်လေး၊ ဟိုးကလေးဘဝကတည်းက ဒီအကြောင်းကိုသိခဲ့တယ်၊ အရွယ်ရောက်လာတော့ သမိုင်း ပညာကို တတ်လာတော့ သမိုင်းမှာ သင်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ၊ ပြန်ပြီးဖော်ထုတ်ဖို့က ရည်ရွယ်ချက် (၁) ပေါ့နော်၊ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဆရာတို့မွန်ပြည်နယ်မှာ တခြားရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုမြို့တွေလည်း အများကြီးဘဲ ဒီလိုမြို့တွေ အများကြီးထဲကနေပြီး လေ့လာလိုက်စားတဲ့လူတွေ လေလာလိုက်စားနိုင်အောင် ရှေးဟောင်းမြို့တွေ အားလုံးကို ဖော်ထုတ်နိုင်အောင် ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာဒီစာအုပ်ကို ရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လို အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေခဲ့ရပါသလဲ ?
ဖြေ။ ။ဒီစာအုပ်ရေးတုန်းက ခက်ခဲသိပ်မရှိဘူး၊ ဘာလို့မရှိလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်သွားကိုယ်လာတာ တွေ့မြင်နေတာတွေ ပြန်ပြီးရေးချတာဘဲ၊ သိပ်အခက်ခဲကြီးတော့ မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ဒီစာအုပ်မှာ စာမျက်နှာပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ?
ဖြေ။ ။တိတိကျကျပြောရရင် အရုပ်ရောဘာရော အားလုံးဆိုရင် စာမျက်နှာပေါင်း ၃၀၆ ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်ပြီးဖို့ အတွက် အချိန်ဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရသလဲ ?
ဖြေ။ ။ရေးတာရော၊ ထုတ်တာရော၊ ရိုက်ရာရော အားလုံးအပြီး စာအုပ်ထွက်သည် အထိဆိုတော့ အချိန် (၁) နှစ်လောက်တော့ ပေးရတယ်။
မေး။ ။ဒီစာအုပ် အုပ်ရေ ဘယ်လောက် ထုတ်ပြီးသွားပြီးလဲ ?
ဖြေ။ ။အုပ်ရေး ၁၀ဝ၀ ထုတ်ပြီးသွားပါပြီး၊ ကျနော်တို့ မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာဘဲ ဖြန့်ရသေးတယ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးဘက် မဖြန့်ရသေးပါဘူး၊ အဲဒီဘက်မှာ ဖြန့်ဖို့ အစီ အစဉ်ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ဒုတိယ အကြိမ်ဆက်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား ?
ဖြေ။ ။ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ အခု ဆရာတို့ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ နောက်လလောက် ဆိုရင် ထွက်ပါပြီ။
မေး။ ။ဒီစာအုပ် တစ်အုပ်ကို ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းသလဲ ?
ဖြေ။ ။တစ်အုပ်ကို ခုနှစ်ထောင် (၇၀ဝ၀) ကျပ်နဲ့ ရောင်းပါတယ်။
မေး။ ။သုဝဏ္ဏဘူမိသုတေသန အကြောင်းကို မှ ဆရာ ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ ?
ဖြေ။ ။ဒါက ကနဦး ကတည်းက လုပ်လာတဲ့ သုတေသနအလုပ်၊ နှစ်(၂၀) လောက် သုတေသန လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်၊ တခြားရေးစရာတွေကတော့ ရှိပါတယ်၊ သုဝဏ္ဏဘူမိဆိုတာ လူတွေ သိပ်မသိကြဘူးလေး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အင်ဒိုနီးရှားမှာလိုလို၊ ထိုင်းမှာလိုလို၊ ကမ္ဘောဒီယားမှာလိုလို၊ အိန္ဒိယမှာအလိုလို ထင်ယောင်ထင်မှာဖြစ်နေတာတွေကို တွေ့ရတယ်၊ ဒါတွေ မကသေးပါဘူး တကယ်ရှိတာက သထုံမှာဘဲ ဆိုတာကို အဲဒါတွေကို ပြောချင်တယ်၊ ဒါတွေကို သိစေချင်လို ဒီအကြောင်းကို ရွေးပြီးရေးလိုက်တယ်။ ဒါဟာ ရှေ့ဟောင်း သုဝဏ္ဏဘူမိဆိုတာကို ရှေ့တောင်အာရှမှာ ပျောက်နေတဲ့ မြို့ဟောင်းကို သမိုင်းသုတေသန လေ့လာလိုက်စားတဲ့လူတွေ၊ ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးက ဘယ်နေရာမှာ မှန်းကိုမသိဘူး။ ဂဃနဏ မညွှန်းပြနိုင်ဘူး၊ ဆရာက ဒါကို ညွှန်းပြနိုင်တာက ဆရာတို့နိုင်ငံရဲ့ ရုဏ်ကျက်သရေလည်းဖြစ်တယ်၊ ဆရာ တို့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ ရုဏ်သိက္ခာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုပြီး ဒါကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
မေး။ ။ ဆရာ့အနေနဲ့ ဒီစာအုပ် ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ ?
ဖြေ။ ။ ဆရာတို့ သုတေသနလုပ်ပြီး တော့မှ ရေးတယ်၊ ထုဆစ်ပြီး ရေးချင်သလိုရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အချက်အလက်တွေကို ရှာရတယ်၊ အထောက်အထားခိုင်လုံပြီး၊ ကမ္ဘာကို ချပြနိုင်ပြီးမှ ဆရာတို့က ရေးခဲ့တာလေး၊ ဒီလိုရေးခဲ့တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ဆရာ စာပေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရှေ့ဆက်ဘာတွေလုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။နောက်ထပ်လည်း ဒီလို သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကို သုတေသနလုပ်အုံးမယ်၊ ရေးအုံးမှာပါ၊ ဒါကအကြမ်းအပြင်းအနေနဲ့ပေါ၊ သုဝဏ္ဏဘုမိဆိုတာက နေရာပေါင်း (၉) နေရာလောက်ရှိတယ်၊ ဒက္ကာတာဆိုရင် ဒက္ကာတာအကြောင်း၊ သထုံဆိုရင် သထုံမြို့တစ်မြို့အကြောင်းပေါ့၊ ဝင်းကဆိုရင် ဝင်းက အကြောင်း အဲဒီလိုဆက်ပြီးရေးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်၊ နောက်ထပ် အသစ်အဆန်း သုတေသနတွေကို ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်၊ တင်ပြသွားမယ် နောက်ထပ် အစီအရင်ခံဖို့အတွက် အစီစဉ်ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ဒီလိုဆုမျိုးကို ဆရာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရခဲ့ ပြီးပြီးလဲ ?
ဖြေ။ ။ ဒါက အမျိုးသားစာပေဆုကို ပထမ ဦးဆုံး ဆုရရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ဆုချီးမြှင့်မယ် အခမ်းအနားဘယ်နေ့လောက်မှာဖြစ်မလဲ ?
ဖြေ။ ။ဒီလ ၂၂ ရက်နေ့၊ နတ်တော်လဆန်း (၁) ရက် စာဆိုတော်နေ့မှာပါ၊ နေရာကတော့ အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံမှာ အခမ်းအနားပြုလုပ်မှာပါ။
မေး။ ။ ဒီလိုဆုရတဲ့အပေါ်မှာ ဆရာရဲ့ခံစားချက်လေး ပြောပြပေးပါ ?
ဖြေ။ ။ တော်တော်လေးကို ဝမ်းသာပါတယ်၊ ဒီလိုဆုရလို့ ဂုဏ်ရှိတာက တစ်ပိုင်းပေါ့နော်၊ နောက်တစ်ခုက သုဝဏ္ဏဘူမိဆိုတာက ဖော်ထုတ်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်၊ အခုလိုဖော်ထုတ်လိုက်တာကို လူအများတစ်စုက လက်ခံတယ်၊ ယုံကြည်တယ် အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ ကိုယ့်သုတေသန လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လူတွေက အသိမှတ်ပြုတယ်၊ လက်ခံတယ်ဆိုတော့လည်း အားရကျေနပ်မိပါတယ်၊ ကျနော်ရဲ့ ဆရာသမားတွေ တပည့်တွေလည်း၊ အားရကျေနပ်ဝမ်းသားကြပါတယ်၊ ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲ တစ်မိသားစုထဲ မကပါဘူး အတိုင်းအဝိုင်းအားလုံးတစ်ခုလုံးက အားရကျေနပ် ဝမ်းသား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
မေး။ ။(စုစုမိ) စာပေ ကရော ဘယ်နေရာမှာ ဖွင့်ထားသလဲရှင် ?
ဖြေ။ ။ဒီ စုစုမိ စာပေက ဆရာရဲ တပည့်ဆိုင်လေးပါ၊ ကိုအောင် ၅ တန်းတုန်းက ဆရာ စာသင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်၊ စုစုမိ ဆိုတာက သူ့ အမျိုးသမီး နာမည်ပါ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဘားလမ်းမှာ ဖွင့်ထားတယ်၊ သူလည်း မွန်တိုင်းရင်းသားပါ။
မေး။ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်၊ ဒီလို အမျိုးသား စာပေဆုရရှိတဲ့အပေါ်မှာ ဆရာရဲ့ ပိတိ စကားသံလေးတွေကို စာဖိတ်ပရိတ်သတ်တွေကို ဘာများပြောချင်ပါသလဲရှင့် ?
ဖြေ။ ။ ဒါက သုတပဒေသာ (ဝိဇ္ဇာ) စာပေဆု ဆိုပြီးတော့ သူတို့ရွေးချယ်တာပေါ့နော်၊ ဆိုလိုချင်တာက ဆရာရေးထားတဲ့ သမိုင်းပေါ့နော်၊ သမိုင်းဆိုတာကလည်း ခေတ်အဆက်ဆက်က ဆရာတွေ ဆီက ဆည်းပူးလေ့လာပြီးတော့မှ ဒီပညာကို ရခဲ့တယ်၊ နောက်ပြီး တက္ကသိုလ်မှာလည်းသင်တဲ့ ပညာတွေပေါ့ ၊ ဒီသင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေနဲ့ ဆရာသမား တွေကို ဒီစာအုပ်နဲ့ ကန်တော့ရတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျနော် အများကြီး တန်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်၊ နောင်လာ နောက်သားအနေနဲ့ တပည့်တွေကိုလည်း ဆရာလုပ်တာတွေ မပြီးသေးဘူး မင်းတို့ဆက်လုပ်ကြ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွန်လိုမျိုး လုပ်ပေးဆိုပြီး အဲလိုခံယူတာပေါ့ ပိတိတော့ အရမ်းဖြစ်ရပါတယ်။
မှတ်ချက်- ဦးစံဝင်း (သမိုင်းသုတေသန) ရေးသားသည့် သုဝဏ္ဏဘူမိသုတေသန (စုစုမိ စာပေ) စာအုပ်ဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် သုတပဒေသာ (ဝိဇ္ဇာ) စာပေဆုတွင် အမျိုးသားစာပေဆုရရှိခဲ့သည့် ဦးစံဝင်းနှင့် IMNA သတင်းထောက် အေမီအောင်၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ချက်ဖြစ်ပါကြောင်း-အယ်ဒီတာ
မေးမြန်းချက် အေမီအောင် 2014-11-06
Tags မေးမြန်းချက် အေမီအောင်
Previous ဘုရားသုံးဆူမြို့ရှောင်လမ်း ဖောက်လုပ်ပေးမည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ NEDA ကမ်းလှမ်းထား
Next အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အခြေခံသဘောတူနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်း